विश्वको सबैभन्दा ठूलो पन्ना - महान अपडेट २०२१ - नयाँ भिडियो
विश्वको सबैभन्दा ठूलो पन्ना
विश्वको सबैभन्दा ठूलो पन्ना ईk्कलामु हो, शेर पन्ना हो तर बाहिया पन्ना अहिलेसम्म पाइएको सबैभन्दा ठूलो पन्ना मानिन्छ।
यो निर्भर गर्दछ कि हामी केहि पत्थर वा एकल क्रिस्टलले बनेको ब्लकलाई विचार गर्छौं।
संसारको सब भन्दा ठूलो पन्ना आज सम्म भेटियो
संसारको सबैभन्दा ठूलो पन्ना बाहिया पन्ना हो: १,1,700,000००,००० क्यारेट
बाहिया पन्ना मा अहिले सम्म भेटिएको सब भन्दा ठूलो एकल शार्ड मध्ये एक छ। यो ढु stone्गा, लगभग 341 1,700,000१ किलोग्राम वा १, weigh००,००० क्यारेट वजनको, बाहिया, ब्राजिलबाट आएको हो र क्रिस्टल होस्ट रकमा इम्बेड गरिएको छ। २०० 2005 मा न्यू अर्लिन्सको गोदाममा भण्डारणको अवधिमा क्याट्रिना तूफानको बहावमा यो बाढीबाट बच्न गयो।
त्यहाँ सेप्टेम्बर २०० in मा लस एन्जलस काउन्टी, क्यालिफोर्नियाको दक्षिण एल मोन्टेको एक सुरक्षित भोल्टबाट चोरी भएको खबर पाएपछि स्वामित्वको विवाद भयो। रत्न स्थित थियो र केस र स्वामित्व सम्झौता गरिएको छ। यस ढु stone्गाको मूल्य some 2008 मिलियन छ, तर वास्तविक मूल्य अस्पष्ट छ।
भरखर १ 180,000०,००० क्यारेट पन्ना पत्ता लगाइएको छ
ब्राजिलको कर्नाईबा खानी भित्र काम गर्नेहरूले हालसालै एउटा विशाल १ 180,000०,००० क्यारेट रत्न पत्ता लगाएका थिए। यो अविश्वसनीय पन्ना नमूना 4.3..309 फिट अग्लो खडा छ र यसको मूल्य $ XNUMX million मिलियन छ।
यो ढु stone्गा ब्राजिलको एक ठाउँमा भेटियो जुन शानदार रत्नहरू उत्पादन गर्दछ, पर्नामाबुको राज्य भित्र कर्नाईबा खानी। रत्नहरूको क्लस्टर खानीमा २०० मिटर गहिरो फेला पर्‍यो र समूहलाई सतहमा लिनको लागि एक हप्तामा १० मानिसहरू चाहिन्छ।
यो नमूना पन्ना बेरिलको कूल १ 180,000०,००० क्यारेटमा मिलेर बनेको छ। आकार, दुर्लभता र क्रिस्टलहरूको संख्यालाई ध्यानमा राख्दै विशेषज्ञहरू अनुमान गर्छन् कि सम्पूर्ण नमूना worth 309 million मिलियनको मूल्य हुन सक्छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो पन्ना क्रिस्टल ईन्कालामु हो, सिंह पन्ना: ,,5,655 क्यारेट्स
विश्वकै सब भन्दा ठूलो पन्ना, १.१ किलोग्राम र अनुमानित m २ मिलियन, जाम्बियाको एउटा खानीमा भेटिएको छ। ,,1.1 क्यारेट रत्न खानी कम्पनी गेमफिल्ड्सले संसारको सबैभन्दा ठूलो पन्ना खानी, अक्टोबर २, २०२० मा फेला पारे।
यसलाई ईन्कालामू नाम दिइयो, जसको अर्थ स्थानीय बेम्भा भाषामा सिंह हो। जेम्सफील्ड्सले भने कि केवल रेस्ट र सबैभन्दा बहुमूल्य ढु stones्गाहरूलाई नाम दिइन्छ। खनिज कम्पनीको संरक्षण कार्यको सम्मानमा बेम्बा नाम छनौट गरियो।
Emerald Unguentarium: २,2,860० क्यारेट
१me2,860 मा खोपिएको २,20.18० सीटी (२०.१1641 औंस) पन्ना फुलदाताको पन्ना इ U्ग्वेन्टेरियम, इस्टिरियल ट्रेजरी, भियना, अष्ट्रियामा प्रदर्शन भइरहेको छ।
पवित्र पन्ना बुद्ध: २,2,620२० क्यारेट
२०० 3,600 मा amb,2006०० सीटी जाम्बियन पन्नाबाट खोपिएको, सेक्रेड पन्ना बुद्ध प्रतिमा २,2,620२० सीटी वजनको छ।
सिद्धार्थ गौतमको प्रतिनिधित्व संसारको सबैभन्दा ठूलो नक्काशीित रत्न हो। उनलाई एक मानक मुद्रा स्थितिमा चित्रण गरिएको थियो जुन परम्परागत रूपमा परिवारका सदस्य (संघ वा पुजारीवर्ग) लाई आपसमा झगडा गर्न नदिनको सल्लाहसँग सम्बन्धित छ।
२,2,620२० क्यारेटमा तौल गरेर यसको सुन्दर निलो हरियो र (्ग छ (क्रोमियम र भ्यानियमको अशुद्धताका कारण), मलाई पन्नाको लागि उत्तम र color्ग हो र यो तुलनात्मक रूपमा समावेश सहित स्वतन्त्र छ।
यस्तो गुणस्तरको लागि कुनै दुर्लभ भागमा भाग लिनको लागि धेरै दुर्लभ हुन्छ किनकि पहरेदार रत्नहरूमा काटिएको बाहेक अरू कुनै भाग्य पनि हुँदैन, त्यसैले कम्पनीले यो कुर्सीमा लिएको निर्णय एक बहादुरी थियो। यो मास्टर जेड शिल्पकारले आung्ग नयिनले खोपेको र पालिश गरेको थियो जुन मूल बर्माका हो तर थाइल्याण्डमा बस्ने।
गिनीज पन्ना क्रिस्टल: १,1,759 c क्यारेट्स
कोस्कोउज पन्ना खानमा पत्ता लगाएको गिनीज पन्ना क्रिस्टल विश्वको सबैभन्दा ठूलो रत्न-गुणवत्ता पन्ना क्रिस्टलमध्ये एक हो, र बोगोटाको बन्को नासियानेल डे ला रिपब्लिकाको क्रिस्टल स of्ग्रहको सबैभन्दा ठूलो पन्ना क्रिस्टल हो। कोलम्बिया।
गिनीज नामको मूल थाहा छैन, तर विस्तारित, १1759-क्यारेट, चहकिलो हरियो क्रिस्टलले निस्सन्देह गिनीज बुकमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो रत्न-गुणक रत्नको रूपमा विश्वको सबैभन्दा धेरै रत्नको रूपमा प्रवेश गर्ने सबै प्रमाणहरू पाए। यो अन्य ठूलो प्राकृतिक पन्ना क्रिस्टल द्वारा पार गरिएको थियो।
१,1,686.3. c क्यारेट LKA र १,1,438 क्यारेट्स स्टीफनसन पन्ना
प्रकृति भूखंडहरू यसको भव्यतामा साँच्चिकै हृदय-रोक्ने चीज सिर्जना गर्न। १,1,686.3..1,438 क्यारेट एलकेए र १,1984 क्यारेट स्टीफनसन पन्ना १ 1969 and XNUMX र १ XNUMX XNUMX in मा फेला पर्‍यो।
हिडेटाइट क्षेत्र भित्र नै संसारको सबैभन्दा रमणीय ढु stones्गाहरू मध्ये एक हो, तर विशिष्ट रत्नविद्हरू आश्चर्यजनक क्रिस्टलको यी दुई विशाल, प्राकृतिक ढु stones्गालाई संसारमा अहिलेसम्म भेटिएको सबैभन्दा ठूलो पन्नामा मानिन्छ: एलकेए र स्टीफनसन।
मिम पन्ना: १,1,390 XNUMX ० क्यारेट्स
एक ठूलो, डि-हेक्सागोनल प्रिज्मेटिक क्रिस्टल १,1,390। ० क्यारेटको एक सुन्दर गहिलो हरियो रंगको साथ अनकट। यो पारदर्शी हो र माथि २/2 मा थोरै समावेशीकरण समावेश गर्दछ, र तल्लो भागमा पारदर्शी हुन्छ। मिम संग्रहालय, बेरूत, लेबनानमा राखिएको।
डेभोनशायर पन्नाको ड्यूक: १,1,383.93..XNUMX क्यारेट्स
डेभनशायर पन्ना ड्यूक विश्वको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा प्रसिद्ध अनकट रत्न हो, जसको वजन १,1,383.93..6 क्यारेट छ। को कोलम्बियाको मुजोमा खानीबाट सुरु भएको यो ब्राजिलका सम्राट पेद्रो प्रथमले १1831१ मा डेभोनशायरको 1851th औं ड्यूक विलियम क्याभेन्डिशलाई उपहार स्वरूप बेचेर बेचे। यो १ London 2007१ मा लन्डनको ग्रेट एक्ग्जीबिशनमा प्रदर्शित भयो र हालसालै नेचुरलमा २०० Muse मा इतिहास संग्रहालय
इसाबेला पन्ना: 964 .XNUMX क्यारेट्स
इसाबेला पन्ना, 964 XNUMX क्यारेट्स काटे स्टोन, को पुरातत्व डिस्कवरी भेन्चर्स, LLC को स्वामित्व रहेको छ।
इसाबेला पन्नाको नाम पोर्चुगलकी रानी इसाबेला, राजा चार्ल्स पाँचौं (१ 1516१ to देखि १ 1556) को रानी ईसाबेला, स्पेनका पवित्र पवित्र सम्राट, अस्ट्रियाका आर्चुकबाट प्राप्त भयो, जसले युरोपभरि फैलिएर विशाल साम्राज्य पाएका थिए, स्पेनबाट। र नेदरल्याण्ड्स देखि अस्ट्रिया र नेपल्स को किंगडम, र स्पेनी अमेरिका को विदेश क्षेत्र पनि।
मेक्सिकोबाट उनलाई लेखेको पत्रमा हर्नान कोर्टेजको पत्थरको चम्किला विवरणहरू सुनेपछि रानी इसाबेलाले क्रिस्टलको लालच गरे र त्यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा राखे। रहस्यमय "पन्नाको न्याय" भनेर चिनिने यो रत्न कोर्टेजलाई प्रस्तुत गरियो, अजेटेक राज्यका राजा मोन्टेजुमा द्वितीयले नोभेम्बर,, १8१ Cor मा कर्टेज आफ्नो सेनाको साथ टेनोच्टिटलान सहरमा प्रवेश गरे। हर्नान कोर्टेजले यस रत्नको नाम राखे महारानी इसाबेलाको सम्मानमा, चार्ल्स पांचको महारानी, ​​पवित्र रोमन सम्राट र स्पेनका राजा।
गाछा पन्ना: 858 XNUMX क्यारेट
बोगोटाबाट १ 1967२ किलोमिटर टाढा अवस्थित कोलम्बियाको गाछालामा अवस्थित भेगा डि सान जुआन भन्ने खानीमा १ 142 XNUMX मा संसारको सब भन्दा मूल्यवान र प्रख्यात पन्नामध्ये एक गाछा पन्ना भेटियो। गाछा चिब्चाको अर्थ "गाचाको स्थान" हो। आजकल क्रिस्टल संयुक्त राज्य अमेरिकामा छ, जहाँ यो स्मिथसोनियन संस्थालाई न्यूयोर्क शहरका जौहरी, ह्यारी विन्स्टनले दान गरेको थियो।
पैट्रसिया पन्ना: 632 XNUMX२ क्यारेट्स
प्याट्रसिया एक ठूलो र शानदार रंगको नमूना हो। 632 1920२ क्यारेटमा, डिहेक्सागोनल, वा बाह्र-पक्षीय, क्रिस्टललाई विश्वमा एक महान पन्ना मानिन्छ। सन् १ XNUMX २० मा कोलम्बियामा फेला पर्‍यो, यो खानी मालिकको छोरीको नाम पछि भएको थियो।
यस क्रिस्टलमा त्रुटिहरू सामान्य छन् तर कडा रत्नको स्थायित्वमा सम्झौता गर्दछ। यो नमूना केहि धेरै ठूला पन्नाहरू मध्ये एक हो जुन प्रयोग नगरिएको छ। आज, कोलम्बिया अझै पनी विश्वको प्रमुख स्रोत हो।
मोगल मुगल पन्ना: २१217.80० क्यारेट
मोगल मुगल पन्ना सबैभन्दा परिपक्व पन्ना हो। लिलामी घर क्रिस्टीले यसलाई वर्णन गरेः
२१ct. -० क्यारेट वजनको मोगल मुगल भनेर चर्चित आयताकार काटिएको पन्ना, ११०217.80 ए.सी. को सुरुमा सुन्दर नासक लिपिमा शियाको आह्वानमा कुँदिएको, उल्टो फोलिएट सजावटको साथ कुँदिएको थियो, केन्द्रीय रोसेट एकल ठूला पोस्त फूलले फ्लांक गरेको थियो। दुबै छेउमा खसफुला फूलको एक लाइनको साथ, क्रस प्याटर्न चीरा र हेरिंगबोन सजावटको साथ कुँदिएका बेभिल किनाराहरू, चारवटा पक्ष प्रत्येक संलग्नकहरूका लागि ड्रिल गरिएको, .1107.२ * *.० * cm.० सेन्टीमिटर।
मूल रूपमा कोलम्बियामा खानीएको, यो भारतमा बेचिन्थ्यो, जहाँ ढु the्गाहरू मुगल साम्राज्यका शासकहरूले चाहेका थिए। मोगल मुगल मुगल क्रिस्टलहरूको बीचमा अद्वितीय छ - ११०1107 ए.एच. (१1695 1696 -१ XNUMX AD AD) - जुन छैटौं सम्राट औरंगजेबको शासनकालमा छ। यद्यपि, मुगल शासकहरू सुन्नी थिए, जबकि शिलालेख, हसन इब्न अली र हुसेन इब्न अलीलाई नाद ए अली भनेर चिनिने समर्पित हेटरोडोक्स सलावाट शिया हुन् जसले सम्भवतः यो औरंगजेबको नभई एउटा हो। उसका दरबारहरु वा अधिकारीहरु।
क्रिस्टीले २ 27 सेप्टेम्बर २००१ मा क्रेताको प्रीमियम सहित १,2001,,1,543,750० मा बेचेको थियो। १ 17 डिसेम्बर २०० 2008 सम्म, यो दोहा, कतारको इस्लामिक कला संग्रहालयको स्वामित्वमा थियो।
क्यारोलिना सम्राट: c 64 क्यारेट
.64.82 XNUMX..XNUMX२ क्यारेट क्यारोलिना सम्राटले नक्शामा ने.क.को खुट्टा राख्दैछ! यो प्रख्यात नर्थ क्यारोलिना एमराल्डलाई गहनाको त्यस्तै टुक्राबाट प्रेरित भनिएको थियो जुन क्याथरिन दि ग्रेटको स्वामित्वमा थियो।
महारानीको भव्य हेक्सागोनल आकारको कोलम्बियाई पन्नाको स्वामित्व थियो जुन पन्ना वरपरको हीराले ब्रोचमा क्रिस्टीको लिलामीमा १.$1.65 मिलियन डलरमा बेचे। क्यारोलिना सम्राट, स्थानीय रूपमा हिडेटाइट, NC मा फेला परेको थियो, गत वर्ष खरिद गरिएको थियो र हालसालै उत्तर प्रदेशको रेलेमा रहेको उत्तरी क्यारोलिना संग्रहालयमा दान गरिएको छ।
यी सबैको भव्य पक्ष भनेको उपभोक्ताले अज्ञात रहन भनेका छन्। संग्रहालयको प्रदर्शनमा तीन अनकन्ट क्रिस्टलहरू भनिन्छ। १,२२ c क्यारेट वजनको यी ढु stones्गाहरू मध्ये सब भन्दा ठूलो चाहिएको निलो हरियो रंग हो जुन अत्यधिक खोजिने मुजो रत्नको तुलनामा गर्न सकिन्छ।
सेन्ट लुइसको पन्ना: .१.51.60० क्यारेट्स
सेन्ट लुइस पन्ना फ्रान्सको राजाको मुकुट सजिलो अस्ट्रिया खानीहरु को साथ साथै सबै भन्दा पुरानो यूरोपीयन पन्नाहरु बाट आउँछ। यी खानाहरू १ th औं शताब्दीसम्म उत्पादित थिए, लगभग १ 19० मा युराल भण्डारको खोज नभएसम्म।
चाक पन्ना: .37.82 XNUMX..XNUMX२ क्यारेट
बडोदा राज्यका शाही शासकहरू, जुन भारतको एक राज्य थियो, कुनै समय यो ढु .्गाको स्वामित्व थियो। यो महारानी साहेबाले लगाएको पन्ना र हीराको हारको केन्द्रबिन्दु थियो, जसले यसलाई आफ्नो छोरा, महाराजा कूचबिहारलाई दिए।
२० औं शताब्दीमा, मणि यसको weight 20० क्यारेट (.38.40..7.680० ग्राम) को वजनबाट पुनगठित गरियो र ह्यारी विन्स्टन इंक। द्वारा डिजाइन गरिएको औंठीमा सेट गरिएको थियो, जहाँ यसको वरिपरि करीव १ pear क्यारेटको pear० नाटक, आकारको हीराले घेरिएको छ।
रिंग श्री र श्रीमती ओ रोय चाक द्वारा १ 1972 XNUMX२ मा स्मिथसोनियन प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयमा दान गरीएको थियो र यसको अंश हो स्मिथसोनियनको राष्ट्रीय रत्न र खनिज संग्रह।
कोलम्बियाबाट एक ,,०7,052२ क्यारेट अनकुट क्रिस्टल, निजी स्वामित्वमा रहेको र अमूल्य मानिन्छ।
लस एन्जलस काउन्टीको नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियममा प्रदर्शन हुने १, 1,965 .XNUMX क्यारेट ने रूसी ढु stone्गाहरू हटाए।
एक १,1,861.90१.2003 ०-सीटी क्यारेट्स अनकट र नाम नभएको रत्न ढु Hidden्गाबाट, NC, निजी स्वामित्वमा। २०० XNUMX मा पत्ता लाग्यो, यो हाल उत्तरी अमेरिकामा पत्ता लागेको सबैभन्दा ठूलो ज्ञात पन्ना हो।
कोलम्बियाको मुजोका पाँच अज्ञात ठूला क्रिस्टलहरू कोलम्बियाको बैंक अफ भल्टमा भण्डार गरिएको छ, २२० क्यारेटबाट १,220 1,796 c क्यारेटसम्मको छ।
फ्रेड लेइटनले 430० क्यारेट बेचे मुगल ढु stone्गाका लाखौं डलरमा बेचे।
कुवेतबाट उनी अल-सबा कलेक्शनमा beautiful stone c क्यारेट क्रिस्टल हेक्सागोनल स्वरुप र २ 398 क्यारेट क्रिस्टल मोती समावेश छ।
क्रिस्टल, सुन र तामचीनी १th औं शताब्दीको मुगल वाइन कप cm सेमी २०० Chris मा क्रिस्टीमा १.17। मिलियन डलरमा बिक्री भयो।
१ 161.20१.२० क्यारेटमा मुगल ढु stone्गाले १ 1.09 1999। मा क्रिस्टीमा १.० XNUMX मिलियन डलर प्राप्त गर्यो।
संसारको सब भन्दा ठूलो नक्कली पन्ना
Teodora:, 57,500०० क्यारेट्स
११..11.5 किलोग्राम हरियो रक विश्वको सबैभन्दा ठूलो पन्ना र डब्ड टियोडोराको रूपमा बिल गरिएको थियो, यो नाम ग्रीकबाट आएको हो र यसको अर्थ "भगवानबाटको वरदान।"
रत्न, तथापि, १ मिलियन डलर भन्दा बढीको ढु stone्गा नहुन सक्छ यसको सुरुको मालिक रेगन रेनेले यसलाई बढावा दिएका छन्।
श्री रेनेलाई जनवरी २०१२ मा ई.पू. भित्री भागको केलोनामा पक्राउ गरिएको थियो, किनकि रोयल क्यानाडाली माउन्टमेन्ट पुलिसले उनलाई हिरासतमा लिएको थियो। श्री रेनेलाई ओन्टारियोमा धेरै धोखाधडी अपराधको आरोप लगाइएको छ, आरसीएमपीले एक छोटो बयानमा भने, र ह्यामिल्टन प्रहरीले उनको पक्राउको लागि उल्लेखनीय वारेन्ट छ।
श्री रेनी पहिले केलोना पुलिसलाई चिन्न सकेका थिएनन, तर उनीले कम प्रोफाइल राख्ने प्रवृत्ति महसुस गरेन। उहाँसँग एउटा तरबूज आकारको बहुमूल्य रत्न थियो, पछि सबै।
वास्तवमा, यो वास्तविक बेरील थियो, तर यो रंगियो।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो पन्ना: प्रायः सोधिने प्रश्न
विश्वको सबैभन्दा ठूलो पन्ना मूल्य कति छ?
विश्वको सबैभन्दा ठूलो रत्न एकल शार्डमा फेला परेको, बाहिया पन्नाको वजन १.1.7 मिलियन क्यारेट वा 752 925२ एलबीएस हुन्छ। यो पूर्वी ब्राजिलको बाहिया क्षेत्रमा पत्ता लागेको थियो। यो विशाल ढु stone्गा, जुन हाल लस एन्जलसको एउटा घरमा बसिरहेको छ, यसको मूल्य $ XNUMX २। मिलियन हुन सक्छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो पन्ना को छ?
१.१ किलोग्राम तौलको र संसारको सबैभन्दा ठूलो पाइएको क्रिस्टल जाम्बियाको एउटा खानीमा भेटिएको छ। ,,1.1 क्यारेट रत्न खानी कम्पनी गेम्फील्ड्सले विश्वको सबैभन्दा ठूलो पन्ना खानी, अक्टूबर २, २०२० मा पाए।
थप gemological जानकारी र पन्ना बिक्री को लागी हाम्रो पसलमा
यो प्रविष्टि मा पोस्ट समाचार र ट्याग सबैभन्दा ठूलो पन्ना, विश्वको सबैभन्दा ठूलो पन्ना, सबै भन्दा ठूलो पन्ना, विश्वको सबैभन्दा ठूलो पन्ना, संसारको सबैभन्दा ठूलो पन्ना.